National Railways of Zimbabwe (NRZ) Archives - Page 3 of 5 - Southern Eye
THE 470km rail track between Bulawayo and Victoria Falls is now a death trap and needs a complete overhaul to the tune of $50 million as rampant vandalism is negatively affecting operations, parliamentarians were told on Monday.
NRZ owes workers $55m
THE National Railways of Zimbabwe (NRZ) owes its workers $55 million in unpaid salaries and this has affected morale at the struggling parastatal, acting general manager Lewis Mukwada said yesterday.
July 29, 2014 - 5:04 am
NRZ needs $1.9 billion for revival: Mabena
THE National Railways of Zimbabwe (NRZ) requires about $1,9 billion in the long-term to be fully revitalised and transformed, Southern Eye Business has established.
NATIONAL Railways of Zimbabwe acting general manager Lewis Mukwada yesterday told Parliament that the parastatal had no plans to reintroduce the “freedom trains” project as the move had proved to be non-viable.
NRZ revival by year-end: Mpofu
THE National Railways of Zimbabwe (NRZ) is on the verge of clinching a recapitalisation package with undisclosed investors amid promises by the government that the struggling parastatal will be back on its feet by the end of the year.
June 23, 2014 - 5:05 am
Mabena’s return a boon for NRZ
FORMER National Railways of Zimbabwe (NRZ) general managerAlvord Mabena returned to the parastatal this week as board chairman and a lot is expected from him.
Mabena bounces back at NRZ
FIFTEEN years after leaving the National Railways of Zimbabwe (NRZ) as general manager, Alvord Mabena was recalled yesterday to revive the operations of the struggling rail parastatal.
NRZ recovery now rests on BDSA loan talks: Official
The National Railways of Zimbabwe (NRZ) has failed to attract suitors to fund its projects, and has pinned the recovery on the talks between government and the Development Bank of South Africa (DBSA) over a $450 million loan facility, an official has said.
May 9, 2014 - 5:06 am
Plans to revive NRZ advanced
PLANS to revive the cash-strapped National Railway of Zimbabwe (NRZ) are at an advanced stage as the country’s major railway firm seeks to breathe new life into its comatose operations with the firm needing $400 million
April 30, 2014 - 5:05 am
THE resuscitation of the defunct Ziscosteel and the tottering National Railways of Zimbabwe (NRZ) will spur the revival of ailing and closed companies in Bulawayo, a Cabinet minister has said.